दङ्गमा आफ्नै श्रीमतीको यौनकाण्डको भिडियो सार्वजनिक गरे – Online Khabar
दङ्गमा आफ्नै श्रीमतीको यौनकाण्डको भिडियो सार्वजनिक गरे
साउन १० गते घोराही उपमहानगरपालिका १७ की २७ वर्षीया रीता डाँगी मृत फेला परिन् ।
उनी घरदेखि करिब एक सय मिटरको दूरीमा पर्ने रूखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । अहिले उनी मृत फेला पर्नुको रहस्य पत्ता लागेको छ । यो रहस्य बुझ्न एक वर्षअघिको घटनालाई केलाउनु जरूरी छ ।
एक वर्षअघि रीता छिमेकी फर्सुराम केसीसँग क्यान्सरको उपचार गराउन भन्दै भरतपुर गइन् । छिमेकी मात्र नभई माइतीसमेत रहेका फर्सुराम र उनीमाथि भरतपुर गएकै बेला उनीहरूबीच अवैध सम्बन्ध रहेको हल्ला चल्यो । त्यो हल्ला त्यत्तिकैमा सीमित रहेन । हल्ला फैलिदै गएपछि गत मंसिरमा स्थानीय अगुवाहरू बसेर आपसी सल्लाहमै कुरा मिलाएका थिए ।
उक्त घटना कोरियामा रहेका श्रीमान मदन डाँगीले पनि चाल पाए । गाउँघरबाट फैलिएको हल्लालाई विश्वास नगरेर श्रीमतीकै मुखबाट सुनेर विश्वस्त हुन खोजे । र, उनले असार पहिलो साता श्रीमतीबाट थप कुरा खोतल्न प्रयास गरे । उनलाई फकाउँदै मोवाईलमा रेकर्ड गरे ।
धेरै फकाएर रीतालाई ‘सबै कुरा भन केही फरक पर्दैन’ भनेर मन चोर्दै रेकर्ड गरे । रीताले पनि ‘फर्सुरामसँग यौन सम्बन्ध’ भएको बताइन् ।
श्रीमती र आफुबीच भएको १५ मिनेटको अडियो मदनले घर पठाइदिए । असार ८ गते राती उक्त अडियो सुनाउँदै रीताका ससुराले निकै बेरसम्म केरकार तथा गालीगलौज गरे । त्यसपछि उनीहरूले उनै फर्सुरामको घरमा पुगेर ‘यी हामीले तिमीहरूको रासलिलाबारे प्रमाण पायौँ अब रीतालाई तैंले स्याहार’ भने । त्यहाँबाट उनीहरू करिब ५ बजेको समयमा प्रहरी कार्यालय गए ।
यता, बिहानपख फर्सुरामकी श्रीमती रमिता केसी र छिमेकी श्रीमाली ओली आएर एक बर्ष अघिको कुरा लिएर ‘मेरा श्रीमानलाई किन यसरी बेइज्जत गरिहन्छेस्’ भन्दै रीतामाथि जाई लागे । उनीहरूले रीतालाई कुटपिट समेत गरे ।
आफ्नो श्रीमानसँग शारीरिक सम्पर्क राख्दै आएको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरेको देखेपछि रीताका ससुरा पहलबहादुर प्रहरी गुहार्न हिँडे । प्रहरीसहित उनी फर्केर आउँदा रीता घरदेखि करिब सय मिटरको दूरीमा पर्ने रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन् ।
दाङ प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । रीताका दाजु चन्द्रविक्रम खड्काले बहिनीको कुटपिटपछि हत्या भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रमिता र श्रीमालीविरूद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि मुद्धा दायर गरेका छन् । कोरियामा रहेका रीताका श्रीमानले भने फर्सुरामले श्रीमतीमाथि बलात्कार गरेको रीताका माइती पक्षलाई भनेका छन् ।
जम्मा ६ वर्षको बच्चाले ५५ करोड रुपैयाँ कमाइन….
श्रीमान अर्कै सङ्ग सुतेको अबस्थामा भेटेपछि अण्डकोष नै बाहिर निकालिदिएपछ
Copyright © 2019 Online Khabar. All Rights Reserved.